ROSE DAY: कुन रङको गुलाब के को प्रतिक ? | Ratopati
ROSE DAY: कुन रङको गुलाब के को प्रतिक ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २४, २०७५ chat_bubble_outline0
प्रेम दर्साउन कुनै विशेष अवसर पर्खिनु पर्दैन । तर यस्ता केही विशेष अवसर हुन्छन् जहाँ प्रेमबारे राम्रै चर्चा हुने गर्छ । हरेक वर्ष फेब्रअरी १४ तारिखमा पर्ने भ्यालेन्टाइन डे आउन अब हप्ता दिन मात्रै बाँकी छ तर यसअघि पनि विभिन्न ‘डे’ मनाइन्छन् । यसै क्रममा आज ‘रोज डे’ परेको छ । यसको अवसरमा हामी तपाईंलाई गुलाबका विभिन्न प्रतिकबारे जानकारी दिन्छौं ।
रातो गुलाबः प्रेम, शान्ति र क्षमताको प्रतिक
भ्यालेन्टाइन डेमा सबैभन्दा धेरै रातो गुलाबको आदान–प्रदान हुन्छ । यसलाई प्रेमको प्रतिकको रुपमा हेरिन्छ । रातो गुलाब प्रेम र मनोभावनाको प्रतिक पनि हो ।
गुलाफी गुलाबः मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतिक
यदि कसैले तपाईंलाई भ्यालेन्टाइन डेमा गुलाफी गुलाब दियो भने तपाईंले बुझ्नुहोस् कि ती व्यक्तिले तपाईंलाई ‘मेरो मुटुको धड्कन तिम्रो लागि बाँचिरहेको छ’ भनिरहेका छन् । गुलाफी गुलाब मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतिक हो । गुलाफी रङको गुलाबले सुन्दरता जनाउँछ र हल्का गुलाफी रङको गुलाबको अर्थ भने सहानुभुती र गाढा गु गुलाफी रङलाई भने कृतज्ञतासँग जोड्ने गरिएको छ ।
पहेँलो गुलाबः मित्रता
पहेँलो गुलाब मित्रताको प्रतिक हो । भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा खासै आदानप्रदान नुहुने यो रङको गुलाब फ्रेन्डशिप डेमा भने जमेर प्रयोग गरिन्छ ।
सेतो गुलाबः साँचो प्रेम र स्वच्छ हृदयको प्रतिक
सेतो गुलाब साँचो प्रेम र स्वच्छ हृदयको प्रतिक हो । कसैले चोखो मनले माया गरेको छ भने सेतो गुलाब उपहारको रुपमा रोज्छन् । सेतो रङको गुलावको अर्थ भने शुद्धता सरलता र शान्तिसँग जोडिन्छ ।
कालो गुलाबः बिदाईको प्रतिक
कालो गुलाब बिदाईको प्रतिक हो । यो रङको गुलाबले माया मरिसकेको दर्साउँछ ।
जीवन मन्त्रः हरेक कुरा विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन, केही कुरा भावनात्मक रुपमा पनि बुझ्नुहोस्
याद राख्नुुस्, यस्ता शब्दले दुख्नसक्छ तपाईंकी पत्नीको मन
कुनै जिनियसमा पाइने यी १४ लक्षण के तपाईंमा पनि छ ?
२०२१ मा यी पाँच तरिकाले हटाउनुहोस् पैसाको चिन्ता
प्रेरक कथाः सुख शान्ति चाहनुहुन्छ भने अरुको खराब पक्ष होइन, राम्रो पक्षमा ध्यान दिनहोस्
अनुशासन, नियम, समर्पणः कुनै पनि काममा हामीलाई विज्ञ बनाउने तीन मन्त्र
थप ९२७१ जनामा कोरोनाभाइरस पुष्टि, १३९ को मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १० सम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरू ऋण लगानीमा आक्रामक, एक सातामा १५ अर्ब बाहिरियो
अमेरिकामा कोभिड–१९ सङ्क्रमित सङ्ख्या घट्ने क्रम जारी
टीकापुर नगरपालिकामा एक महिनाभित्र १८ संक्रमितको मृत्यु
सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्केका थप चारमा संक्रमण पुष्टि: आरोहीमा प्रभाव शून्य
नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म यही मन्त्रिपरिषदले काम गर्ने
बेलायती पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको लेख : अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘शेर्पा’ बन्न आह्वान